विज्ञहरू भन्छन्– 'निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुको अर्थ जोखिममुक्त भएको होइन'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
विज्ञहरू भन्छन्– 'निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुको अर्थ जोखिममुक्त भएको होइन'
असार १४, २०७८ बुनु थारु
काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण बढेपछि वैशाख १६ गते एक साताका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियोे । सोमबार बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले असार २१ गतेसम्म केही क्षेत्र खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेका छन् ।
मंगलबारदेखि उपत्यकामा २५ भन्दा बढी सिट भएका सवारीसाधनलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । साथै खाद्यान्न तथा कपडा पसल पनि बिहान ११ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय गरेको छ ।
संक्रमण दर घट्दै गएकाले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइए पनि खुकुलो भएपछि फेरि संक्रमण बढ्ने त होइन भन्नेमा विज्ञहरु चिन्तित देखिन्छन् । उनीहरुका अनुसार निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपनि जोखिम कायम नै रहेको छ ।
सोमबारको तथ्यांक हेर्ने हो भने सक्रिय संक्रमितको संख्या ५.९७ प्रतिशत रहेको छ भने निको हुनेको प्रतिशत ९२.६० प्रतिशत रहेको छ र मृत्यु हुनेको १.४२ प्रतिशत रहेको छ । दैनिक संक्रमितको संख्या हर्ने हो भने लगभग ३ हजारको हाराहारीमा संक्रमितहरु थपिँदै गएको देखिन्छ । निको हुनेको संख्यामा भने वृद्धि भएको देखिन्छ तर दैनिक मृत्युको संख्या हेर्दामा खासै फरक देखिँदैन ।
संक्रमणको अवस्था :
निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि संक्रमणकोे जोखिम अझै उत्तिकै छ भएको र सावधानी अपनाएर मात्र घर बाहिर निस्कन विज्ञहरुको आग्रह छ ।
शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले जोखिम उत्तिकै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निषेधाज्ञाका कारण संक्रमण हुनबाट रोकेको रहेछ भने ती व्यक्तिहरुमा अहिले संक्रमणको सम्भावना देखिन सक्छ । किनकी मान्छेहरुका चहलपहल सुरु हुन्छ ।’
उनका अनुसार पहिलेजस्तो दसौं हजारको हाराहारीमा संक्रमण नभएतापनि संक्रमणको जोखिम यथावत छ । उनले व्यापार व्यवसाय, कार्यालय, सार्वजनिक यातायातलगायत क्षेत्रमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर व्यवस्थित बनाइनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले संक्रमणको दर घटिरहे पनि जोखिम उस्तै रहेको बताउँदै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुको अर्थ हामी जोखिममुक्त भयौं भन्ने मानसिकताबाट एकदम माथि उठ्नुपर्ने जोड दिए । डा. वन्तले भने, ‘सधैंभरि लकडाउन मात्र गरेर समस्याको हल निकाल्न सकिँदैन । पहिलो चरणको जस्तो फेरि गल्ती नदोहोरियोस् । मापदण्ड अझै गम्भीरताका साथ सतर्कता र जिम्मेवारी साथ अभ्यास गर्नुपर्छ ।’
उनले चलायमान बढेसँगै सम्पर्क बढ्ने र जोखिम पनि सँगै बढ्ने हुनाले अझै सतर्क हुन जरुरी रहेको बताए । डा. वन्तले सरकारले परीक्षण, आइसोलेसन लगायतका कुरामा नियमित हुनुपर्ने बताउँदै सबैलाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी पनि कोरोनाबाट बच्न खोप प्रभावकारी रहेको बताउँदै एक डोज भएपनि प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिहलाई खोप दिनुपर्ने बताए । डा. अधिकारीले भने, ‘वृद्धवृद्धा तथा दीर्घरोगीलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो । एउटा डोजले भएपनि मृत्युको जोखिम घटाउँछ भन्ने प्रमाणित छ ।’
उनका अनुसार अक्सिजन चाहिने केस र केस डिटेक्सन रेटका बारेमा खोजी गर्नुपर्छ । उनले अहिले देखिएको डेल्टा भेरियन्ट धेरै चाँडो फैलिने र मृत्यु हुन सक्ने भएकाले थप कडाइका साथ नियम लागू गरिनुपर्ने बताए ।
कोरोनाको हटस्पट कहाँ छ त्यो पहिचान गर्दे सिल गर्नुपर्ने, धेरैभन्दा धेरै परीक्षणको व्यवस्था हेर्नुपर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तथा आइसोलेसन गनुपर्ने लगायतका कुरामा जोड दिनुपर्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रकाशित : असार १४, २०७८ २०:५६
खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन ढिलो भयो भने प्रभावकारिता घट्छ ?
असार १०, २०७८ बुनु थारु
काठमाडौँ — फागुन २३ गतेपछि कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका देशभरका ६५ वर्ष र १४ जिल्लाका ५५ वर्षमाथिका गरी साढे १३ लाख बढी व्यक्ति दोस्रो मात्राको खोपको पर्खाइमा रहेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोपको पहिलो मात्रा लगाएको ९ देखि १२ हप्तासम्ममा दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्ने बताएको छ । नेपालमा पनि समयमा खोप प्राप्त नहुँदा दोस्रो खोपको मात्राको अवधि लम्बिँदै गएको छ ।
जेठ २३ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाविरुद्धको खोप कोभिसिल्ड नआउने भएपछि यसको पहिलो डोज लगाएका व्यक्तिलाई सरकारले दोस्रो मात्रामा एउटै प्रकृतिको एस्ट्राजेनेकाको खोप लगाउने बताएको छ । दुई साताभित्र खोप आउन सक्ने बताए पनि खोप आउने अझै छाँटकाँट भने देखिँदैन ।
भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मे १३ मा कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा ६ देखि ८ हप्तादेखि दिनुपर्नेमा १२ देखि १६ हप्तासम्म अवधि बढाउने निर्णय गरेको थियो । नेशनल टेक्निकल एड्भाइजरी ग्रुप अन इम्युनाइजेसनले दोस्रो खोपको लागि १६ हप्तासम्म लगाउँदा प्रभावकारिता बढ्ने सिफारिस पछि सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
नेशनल इन्स्टिच्युट अफ इपिडिमियोलोजीका पूर्व निर्देशक डा. एमडी गुप्ते भन्छन्– ‘अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले ८ देखि १२ हप्तासम्ममा दोस्रो डोज दिने भनेको हामीले मान्दै आएको हो ।’ उनले १२ देखि १६ हप्तासम्म गर्ने निर्णय ठीक होला वा नहोला यकिनका साथ भन्न नसक्ने भन्दै यसबारे पर्याप्त ठोस जानकारी आइनसकेको बताए ।
भारतका वरिष्ठ भाइरोलोजिस्ट साहिद जमिलले सरकारी अधिकारीहरुले खोपको अवधि किन बढाइएको बारेमा स्पष्ट पानुपर्ने बताउँछन् । ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’ बढिरहेका बेला सबैजनाले खोप पाउनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
दोस्रो खोपको अवधि लम्बिनुमा केहीले वैज्ञानिक कारण भनेका छन् भने केहीले खोपको अभावको कारण अवधि बढाइएको बताइरहेका छन् ।
‘खोपको दोस्रो मात्राको अवधि लम्बिए पनि यसले काम गर्छ’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोख्रेलले संसारभरी भनेको जस्तो मात्रामा खोप पाउन नसकेकाले दोस्रो डोजको मात्रा लगाउनुपर्ने छुटेको बताउँदै ९ देखि १२ हप्तासम्म दोस्रो मात्रको खोप लगाउनुपर्ने राम्रो मानिएको भएपनि त्यसपछि लगाउँदा पनि हानी नहुने दाबी गर्छन् ।
डा. पोखरेल भन्छन्– ‘१२ हप्तापछि वा जति बढी समय भयो त्यति राम्रो पनि भनेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले । तर ठ्याक्कै सिफारिस भने गरिससकेको छैन ।’ उनका अनुसार १२ हप्तापछि पनि खोप लगाएको खण्डमा एन्टिबडीको लेभल बढेको र संक्रमण प्रतिरोधी क्षमता अझ राम्रो हुने देखिएको छ । ‘भारत सरकारले १६ हप्तासम्ममा दिने भनेको छ । हामीले पनि भारत सरकारको आधार मान्यौँ,’ उनले भने ।
डा. पोखरेलले महामारीमा बनेको कुनै पनि खोपले कति समयसम्म काम गर्छ, कुनकुन भेरियन्टलाई काम गर्छ वा गर्दैन अध्ययनको पाटो भएको बताए । उनका अनुसार एक डोज लगाएपनि यसले अधिकताम काम गर्छ र सुरक्षा दिन्छ । ‘सकेसम्म दुई डोज भनिएको छ । त्यो पूरा गर्नुपर्छ । ढिलो भएपनि प्रतिरक्षा शक्ति शुन्य हुँदैन । घट्दै जाला तर फेरी खोप लगाए, फेरी बढाएर लैजान्छ,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘एउटा खोपले पनि संक्रमण तथा मृत्यु दर घटाएको छ ।’
उनले यो महिनाभित्र खोप कहिले आउने भन्ने आधिकारिक जानकारी आउने बताउँदै जुलाई महिनाभित्र खोप दिने भनिएको दाबी गरे । ‘कति दिन्छ भनेर यो हप्ताभित्रमा जानकारी हुन्छ । कति मात्रामा कोभ्याक्सबाट आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।
कोभिड भ्याक्सिन एक्सपर्ट एड्भाइजरी कमिटीका कोअर्डिनेटर डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले पहिलो मात्रा लगाएको ८ देखि १२ हप्तापछि दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्ने बताएको छ । उनले पहिलो मात्राको खोप लगाएपछि ३ महिनासम्म सुरक्षा गर्ने दाबी गर्दै त्यसपछि कतिसम्म सुरक्षा दिन्छ त्यो यकिन भइनसकेको बताए । डा. उप्रेती भन्छन्, ‘ अहिलेसम्मको अध्ययनमा त १२ हप्ताभित्र दियो भने सुरक्षित भइन्छ भन्ने भन्ने छ । तर १२ हप्ता पछि एन्टिबडी घट्न सक्छ वा संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्छ भन्ने पनि हो ।’ उनका अनुसार जुन बेलासम्म दोस्रो मात्राको खोप दिइँदैैन संक्रमणको जोखिम हुनसक्छ ।
ओम अस्पतालका कन्सलटेन्ट पिडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट तथा रिम्याटोलोजिस्ट डा. धर्मगत भट्टराईले अध्ययनमा १६ हप्तासम्म लम्ब्याउँदा केही फरक नपर्ने र त्यसबाट पनि इम्युन रेस्पोन्स उत्तिकै आउने देखिएको बताए ।
उनका अनुसार खोप ढिलो लगाउँदा खोपको प्रभावकारिता कम आउँछ भनेर देखिएको छैन । ‘लगाउने अवधि कटेर ढिलो भएमा केही मात्रामा कमी हुन सक्छ । तर त्यसले सुरक्षा नै नदिने भन्ने होइन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार कुनैपनि खोपले सत प्रतिशत सुरक्षा दिने र प्रभावकारी हुने भन्ने देखिएको छैन । यद्यपी खोपले मुख्य कुरा कोरोनाको जटिल र गम्भिर प्रकृतिका बिरामी हुनबाट पक्कै पनि बचाउँछ । ‘खोपले सुरक्षा दिन्छ तर, संक्रमण नै नहुने भन्ने होइन । दुवै डोज लगाएकोलाई पनि देखिएको छ त्यसैले सावधानी अपनाइराख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
‘खोपको दोस्रो मात्राको अवधि बढ्यो भने जोखिम हुनसक्छ’
अमेरिकी राष्ट्रपतिका मेडिकल एडभाइजर डा. एन्थोनी फौचीले दुई खोप बीचको अवधि लामो भएको खण्डमा त्यसले कुनै एक कोभिड भेरियन्टको संक्रमणको जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताउँछन् ।
‘मोर्डनाको लागि ४ हप्ता तथा फाइजरका लागि ३ हप्ता खोपको ग्याप उचित हो । अन्तराल बढाउँदै लगेमा अरु भेरियन्टकोे जोखिममा पर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
फौचीका अनुसार बेलायतमा पनि खोपको दोस्रो मात्रा दिन ढिलाइ गरेकोले सो अवधिमा संक्रमणमा पर्न सम्भावना बढेको छ । एक भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै डा. फौचीले सबै मानिसलाई भाइरसबाट बचाउन छिटोभन्दा छिटो खोप दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष भारतमा डेल्टा भेरियन्ट देखिएको थियो । त्यसले नै भारतमा दोस्रो लहरको कोभिड फैलिएको पुष्टि नै भइसकेको छ । नेपालमा पनि डेल्टा भेरियन्टकै कारण संक्रमण व्यापक भएको देखिएको छ । विज्ञहरुका अनुसार यो भेरियन्ट ४० देखि ५० प्रतिशत बढी संक्रामक रहेको छ । डा. फौचीका अनुसार खोप जति छिटो लगायो त्यति नै जनसंख्यालाई भविष्यमा हुने अन्य संक्रमणका लहरमा पनि बचाउँछ ।
डेल्टा भेरियन्ट धेरै राष्ट्रहरुमा अहिले देखिएको छ । जुन एक व्यक्तिबाट अर्कोमा छिटो तरिकाले सरिरहेको पाइएको छ । खोप नपाएको खण्डमा संक्रमण झन् बढ्न सक्ने बताइएको छ ।
‘डेल्टा’ भेरिएन्टको विकसित रुप ‘ए वाई १’ अर्थात् ‘डेल्टा प्लस’ नेपालमा पनि फेला परेको पुष्टि भइसकेको छ ।
प्रकाशित : असार १०, २०७८ १८:१८